Kumaa loo doortay Man of the match kulankii Liverpool iyo Arsenal? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kumaa loo doortay Man of the match kulankii Liverpool iyo Arsenal?
(27-8-2017) Kadib kulankii xiisah badnaa ee dhex maray kooxaha Liverpool iyo Arsenal ayaa waxaa lasoo Saaray Magaca Cayaaryahankii ahaa kii ugu fiicnaa Garoonka dhamaan intii dheeshey Cayaartaas oo 4-0 loogu awood sheegtay Arsenal.
Cayaaryahanka lagudoonsiiyey Man of the match ayaa Noqday Xiddiga kooxda Liverpool ee Sadio Mane kaas oo Sameeyey wixii ugu fiicnaa ee Cayaaryahan ka sameeyo Garoonka waxaana uu dhaliyey Gool qurux badan sidoo kale waxa uu abuuray Fursado badan oo ay Goolal ku dhalin karayeen kooxdiisa.
Liverpool ayaa Cayaar aad u qurux badan ku soo bandhigtay Garoonkeeda waana mida keentay in ay 4-0 kaga badiyaan wiilasha Macalin Arsene Wenger oo ceeb iyo fadeexad kala soo laabnaya Magaalada Liverpool.